Maaha Inuu Xidho Shaadhka Chelsea, Degdeg Haloo Iibiyo – Jamaahiirta Chelsea Oo Aan Waxba Ula Hadhin Laacib Ay Dalbadeen In Kooxda Laga Eryo Oo Ay Xalay Garoonka Ku Arkeen – Cadalool.com
Maaha Inuu Xidho Shaadhka Chelsea, Degdeg Haloo Iibiyo – Jamaahiirta Chelsea Oo Aan Waxba Ula Hadhin Laacib Ay Dalbadeen In Kooxda Laga Eryo Oo Ay Xalay Garoonka Ku Arkeen
Taageereyaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa kabaha la dulmaray xiddig ka tirsan kooxooda oo ay hore u dalbadeen in ay la eryo, laakiin shaxda koowaad ee tababare Maurizio Sarri kusoo baxay kulankii guul-darrada 1-0 ay kasoo gaadhay xalay ee Tottenham ay kaga adkaatay garoonka Wembley.
Lugta koowaad ee wareegga semi-finalka Carabao Cup, ayaa waxay Chelsea guul-darro kala soo laabatay ciyaar ay ugu tagtay Tottenham oo uu caawiyey garsoor caawiyaha VAR oo ku qasbay garsoore Michael Olivier inuu rikoodhe siiyo Harry Kane oo uu qalad ku galay goolhaye Kepa, hase yeeshee muuqaallo kale caddeeyeen inuu ku jiray offside ka hor intii aanu kubadda helin.
Chelsea waxay samaysay isku-dayo badan, waxaase bandhig wanaagsan sameeyey goolhayaha Tottenham Paulo Gazzaniga oo ka diiday fursado badan.
Haddaba taageereyaasha Chelsea ayaa qaybtii hore ee ciyaartii guul-darrada, waxay si weyn u canaanteen saddex laacib oo kooxdooda ah, laakiin midkood ayay dalbadeen in aanu mar dambe xidhanin funaanadda kooxdooda.
Jamaahiirta oo hore u dalbaday in laacibkan la iibiyo, ayaa waxay ka cadhoodeen in mar kale uu kusoo baxo shaxda koowaad ee kulankan adkaa, waxaanay si weyn ugu boorriyeen tababare Sarri in aanu mar kale hortooda keenin.
Ross Barkley, Willian iyo Marcos Alonson ayaa dhibbane u noqday canaanta jamaahiirta, laakiin umay sinnayn, waxaase si gaar ah ay u ciqaabeen laacibka reer Brazil ee Willian oo ay tababarahahooda u sheegeen in aanay doonaynin inay mar dambe ku arkaan kooxda.
“Waa maxay sababta uu Willian weli uga sii mid yahay ciyaartoyga Chelsea.” Sidaa waxa soo qoray taageere lagu magacaabo Aiden Azarr, laakiin Abo Talib, ayaa waxa uu isaguna codsaday in la iibiyo Marcos Alonson, halka Mitty uu canaantiisa u jeediyey Ross Barkley oo uu dalbaday in garoonka laga saaro.
Halkan ka akhriso qaar ka mid ah falcelintii jamaahiirta Chelsea ee qaybtii hore ee kulankii Tottenham.